Gburugburu ebe obibi mmiri: njirimara, ụdị, ahịhịa na anụmanụ | Mmeghari ohuru Green
Na okike enwere ụdị ihe dị iche iche nke gburugburu ebe obibi dịka njirimara ha na gburugburu ebe achọtara ha. Otu n'ime gburugburu ebe obibi bụ nke mmiri. Ihe omumu ihe omimi nke mmiri bu ndi na -anabata oke ndu na uzo di iche iche na nnukwu ihe di iche iche nke osisi, anumanu, microorganisms na molecule. Ọ bụ ezie na ọdịdị nke usoro okike mmiri Ọ nwere ike ịdị ka otu, ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị ndụ na mbara ala dị iche iche. Ọ nwere njirimara dị iche iche site na mkpanaka ruo na ebe okpomọkụ n'ụwa niile. Enwere ọtụtụ nde obodo nke ihe ndị dị ndụ bi na gburugburu ebe obibi ndị a wee bụrụ ebe jupụtara na ndụ.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị gbasara njirimara na mkpa niile dị na gburugburu ebe obibi mmiri.
1 Kedu ihe bụ gburugburu ebe obibi mmiri
3 Flora na anụmanụ nke gburugburu ebe obibi mmiri
4 Ụdị gburugburu ebe obibi mmiri
Kedu ihe bụ gburugburu ebe obibi mmiri
Ihe omumu nke mmiri bụ ụdị gburugburu ebe obibi mmiri, nke ejiri mmiri nnu dị ka ihe mejupụtara ya. Ebumpụta ụwa nke mmiri na -agụnye gburugburu ebe obibi dị iche iche, dịka oke osimiri, oke osimiri, oke nnu, coral reefs, mmiri oke osimiri na -emighị emi, estuaries, ọdọ mmiri nnu nke dị n'ụsọ osimiri, oke okwute okwute, na mpaghara oke osimiri.
Dị ka anyị nwere ike iche n'echiche, ihe dị iche iche nke gburugburu mmiri jikọtara ọnụ na -akwado ụdị ahịhịa na anụmanụ dị iche iche dị ịtụnanya. N'akụkụ na -abịa, anyị ga -ahụ ihe osisi mmiri na otu anụmanụ dị n'oké osimiri mejupụtara ihe dị ndụ dị ndụ nke ihe ndị dị ndụ, yana njirimara anụ ahụ na kemịkal nke na -akọwa ha.
Nchịkọta nke gburugburu ebe obibi mmiri niile nwere 70% nke elu ụwa. A na -ekesa gburugburu ebe obibi mmiri na mpaghara biogeographic dị iche iche. A na -etinye ha n'ime otu ihe ọkụkụ dị n'ime mmiri. Ihe mejupụtara ha bụ mmiri nwere nnu etisasịworo dịka ihe bụ isi. Njupụta nke mmiri nnu dị elu karịa nke ihe ndị ọzọ dị n'ime mmiri dị n'ime mmiri, nke na -ekwe nkwa ịdị ndụ nke osisi na anụmanụ ndị na -eme mgbanwe maka oke mmiri a.
E nwere ụdị mpaghara abụọ, dabere ma ha enwetara ìhè anyanwụ, ịmata ọdịiche dị n'etiti mpaghara na-enwu gbaa na ebe anaghị enwu ọkụ. Ịrụ ọrụ nke gburugburu ebe obibi mmiri na -adaberekarị na oke osimiri, ọrụ nke ebili mmiri na -esite n'ịchịkọta na ibufe nri dị iche iche, ka ahịhịa na anụmanụ ndị bi na gburugburu ebe obibi ndị a dị mgbagwoju anya wee tolite wee dịrị ndụ.
Ihe omumu ihe omimi nke mmiri bu isi mmalite nke akụnụba nke ndu, nke ihe dị iche iche sitere na ihe dị ndụ, dị ka ihe ọkụkụ na -emepụta ihe (osisi) na ndị na -azụ ahịa (azụ na mollusks), ndị na -azụ ahịa nke abụọ (obere azụ na -eri anụ) na ndị na -ere ụlọ akwụkwọ sekọndrị (nnukwu azụ na -eri anụ). Size) na ihe ndị na -emebi emebi (nje na fungi). N'aka nke ya, ụfọdụ ihe abiotic na -akọwa njirimara nke gburugburu ebe obibi ndị a, dịka ọnọdụ okpomọkụ, nnu na nrụgide mmiri ya, yana oke anwụ ọ na -enweta.
Flora na anụmanụ nke gburugburu ebe obibi mmiri
Ọtụtụ osisi, gụnyere ụdị na -emikpu n'ime mmiri na nke na -apụta na ụdị ihe na -ese n'elu mmiri, mejupụtara ihe ọkụkụ dị ndụ dị ndụ nke ihe niile dị n'ime mmiri. Kpọtụrụ kpọmkwem na njirimara anụ ahụ na kemịkalụ nke ụdị ihe ndị dị n'ime mmiri na -ebi, ụdị ndị a ha ga -egosi ụdị ndụ ụfọdụ ma ọ bụ ndị ọzọ, ha ga -enwekwa mkpa ụfọdụ dị mkpa.
Algae bụ ifuru mara mma nke gburugburu ebe obibi mmiri. Ụdị ezinụlọ dị iche iche, ụdị na ụdị dị iche iche na -eme ka ihe ndị dị n'ime mmiri na -ejupụta na ndụ na agba, e kewaa ha na agba aja aja, ọbara ọbara, ma ọ bụ algae akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ụfọdụ bụ microscopic (diatoms na dinoflagellates), ebe ndị ọzọ na -ewere macroalgae, ọkachasị nnukwu algae stratified nke genus Macrocystis. Algae na -eme mgbanwe oge niile na ọnọdụ okpomọkụ na njirimara anụ ahụ na kemịkalụ nke mmiri ebe ha na -eto ma na -ebi, a na -ekesa ya na gburugburu mmiri na mpaghara niile nke ụwa.
Na mgbakwunye na ahịhịa mmiri, ahịhịa nke ihe ndị dị na mmiri na-agụnyekwa ụdị osisi dị iche iche, gụnyere ihe a na-akpọ oke mmiri (ezinụlọ ifuru mgbanaka, Cymodoceaceae, Ruppiaceae na Posidoniaceae), nke bụ naanị okooko osisi na gburugburu ebe obibi ndị a; mangroves (gụnyere mangroves: mangle Rhizophora na mangroves ọcha: Laguncularia racemosa na ụdị ndị ọzọ) na phytoplankton bara ụba.
Oké osimiri, oke osimiri na ihe ndị ọzọ dị na gburugburu mmiri bụ ụfọdụ ebe obibi dị iche iche dị iche iche n'ụwa, anụmanụ nke otu dị iche iche, ezinụlọ na ụdịrị na -ebikọ ọnụ na nguzo. Vertebrates na invertebrates nnukwu na obere, dị ka ụmụ nje, ha na -ebikọ ọnụ na gburugburu ebe obibi mmiri nke ụwa. Ndị a bụ ụdị anụ ọhịa ndị anyị nwere ike ịhụ:
Ụmụ anụmanụ Anyị nwere ike ịchọta ụdị whale niile dị ka whale na -acha anụnụ anụnụ, whale isi awọ, whale spam, orcas, dolphins ... wdg.
Ihe nākpu akpu: Dị ka agwọ oke osimiri, mbe ndụ ndụ, mbe hawksbill ... wdg.
Nnụnụ: Ebe anyị ga -ahụ pelicans, oke osimiri, oke osimiri, osprey ... wdg.
Azụ: N'ebe a, anyị nwere ike ịchọta ụdị azụ niile na nhazi ya dị ka azụ parrot, azụ na -afụ ụfụ, azụ ịwa ahụ, azụ igbe, azụ sergeant, azụ nwa, azụ azụ, azụ azụ, azụ nru ububa, naanị, angelfish, ụzarị, sardines, anchovies, tuna … Etc.
Ụdị gburugburu ebe obibi mmiri
Ala mmiri mmiri: Ọ na -ezo aka n'ọnụ ụzọ mmiri ma ọ bụ osimiri ebe nnu dị ntakịrị karịa ihe anyị nwere ike ịhụ n'oké osimiri. Enwere ike ikwu na ọ bụ mpaghara etiti n'etiti mmiri nnu na mmiri dị ọhụrụ. Ha bụ ebe na -eme nri nke ọma.
Apiti: Ha bụ mpaghara mmiri nnu ma ọ bụ ọdọ mmiri. Ala nke na -amịkọrọ mmiri n'oké osimiri na osimiri, mmiri dị jụụ, ọ naghị enwe mmegharị ọ bụla. Dị ka ebe obibi, ọ na -enye ọtụtụ akụ maka azụ, ụdị mollusks dị iche iche, na ụmụ ahụhụ.
Udo: Ọ bụ mpaghara osimiri osimiri, yana mgbanwe nnu, na -enweta osimiri Aguadulce na -aga n'ihu. Ihe ọjọọ anyị nwere ike ịhụ nwere ike ịbụ nshịkọ, oporo, agwọ na ọbụna mụ na ọtụtụ ụdị nnụnụ, yana ụdị ndị ọzọ.
Mangroves: Ha bụ oke ọhịa na -etolite na ọwa etiti n'etiti etiti na oke osimiri. Ahịhịa bụ isi bụ obere ọhịa emegharịrị na mmiri brackish. N'ime mmiri mangrove, anyị nwekwara ụdị azụ dị iche iche, ahịhịa ma ọ bụ ihe na -akpụ akpụ dị iche iche, nke na -eji osisi dị ka ebe nchekwa ma ọ bụ naanị dị ka nri.
Ala ahịhịa juru: Ha bụ mmiri dị n'ụsọ osimiri nwere omimi nke ihe dịka 25 m, ebili mmiri adịghị ike nke ukwuu na osimiri na -ebu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsị. Otu n'ime ọrụ ndị akwa akwa mmiri bụ iji gbochie nzere n'ụsọ osimiri.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara gburugburu mmiri na njiri mara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Usoro ohia